Khipha | October 2021
Main > Khipha
khipha isicabucabu solitaire
Khipha isicabucabu solitaire - ungaxazulula kanjani
Ngikukhipha kanjani ukonga ku Windows 10? Windows 10: Chofoza inkinobho yokuqala (noma cindezela ukhiye weWindows) ukuvula imenyu yokuqala, chofoza ku-Amasethingi phezulu. Chofoza ku-App nezici kumenyu engakwesokunxele. Ngakwesokudla, thola i-SavingsCool bese uyichofoza, bese uchofoza inkinobho yokukhipha. Chofoza ku-Khipha ukuze uqinisekise.
ayikwazi ukukhipha i-kb3035583
Ayikwazi ukukhipha i-kb3035583 - unganquma kanjani
Ngisusa kanjani uhlelo lokusebenza lwesiteshi sezulu ku Windows 10? Landela lezi zinyathelo ukususa uhlelo lokusebenza ku-pc: Cindezela u- 'Windows key + I' ukuthola isikrini esithi 'Amasethingi '.Click ku-“ System ”ukuze uchofoze ku-“ Apps and Features ”.Khetha uhlelo lokusebenza olufunayo bese ukhetha ukukhipha. Landela izinkomba ezikusikrini ukuze uqedele ukukhipha. Uma lokhu sekwenziwe kabusha i-pc. 27 mei 2016
khipha ideskithophu ye-bing
Khipha ideskithophu ye-bing - izixazululo zezinkinga
Ngiyisusa kanjani i-akhawunti yami ye-DC Universe Online? Okubhaliselwe kwe-Google Play / AndroidIya ku-wallet.google.com bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho.Kukhasi elithi 'Okwenziwayo', thola bese uqhafaza kokubhalisile ongathanda ukukukhansela.Cindezela ku-Update noma ukhansele okubhalisile.Cofa okubhaliselwe okuthi Khansela inkinobho.
Khipha umakhi we-3d
Khipha umakhi we-3d - indlela yokuphatha
Kuyini ukwamukelwa kwe-HP futhi ngiyayidinga? I-HP Welcome Center inguhlobo lwe-HP olunegama le-Windows Welcome Center, oluqala lapho iWindows iqalisa. Isikhungo se-HP Welcome sikunikeza izixhumanisi nolwazi ngemikhiqizo ye-HP. Futhi unokufinyelela ezingxenyeni eziningana ezisetshenziswa kakhulu zeWindows.
Isimo sezulu ngeke sikhiphe
I-Weatherbug ngeke ikhiphe - Qedela iManuwali
Ngisusa kanjani i-WeatherBug? Ungayisusa kanjani i-WeatherBug? Chofoza u-QALA (ezansi, kwesobunxele kwesikrini sekhompyutha) Khetha IZILUNGISELELO NESIKHUNGO SOKULAWULA. Qhafaza kabili ENGEZA / SUSA IZINHLELO Khetha u- 'WeatherBug' (noma ezinye izinhlelo) ohlwini lwezinhlelo zokusebenza.Chofoza u-ADD / REMOVE bese ulandela imiyalo.